Isu tinogovana pfungwa nyowani yewatchOS 6 iyo inonakidza | Ndinobva mac
Kuuya kwewatchOS 6, macOS 10.15, iOS 13 uye mamwe masisitimu anoshanda eApple ari padyo nekona uye ndezvekuti isu tiri muna Chivabvu uye hatifanire kurangarira izvo Inotevera June 3 iyo WWDC inotanga ine 0una yakakosha muSan Jose, mune iyo nhau dzeakasiyana Apple anoshanda masisitimu anoratidzwa.
Kunyange zuva racho rinosvika hatinete nekuona runyerekupe, nhau uye pfungwa dzekuti izvi OS zvinogona kubatsira sei kumidziyo yedu uye nhasi yave mukana weWatchOS. Zvinotaridza kuti iyi nyowani vhezheni yesystem iri kuzotiunzira shanduko dzinoverengeka uye kugadzirisa, asi pfungwa dzatinowana paInternet dzinowanzo kupa izvo zvishoma zvishoma zvekuvandudza kana tariro, mune chero mamiriro ezvinhu zvakakodzera kuona.
Jake sworski, iri pamusoro peiyiwatchOS 6 pfungwa uye chokwadi ndechekuti inowedzera dzimwe sarudzo dzinogona kukwana mushe mushe inotevera OS yewachi yedu, pano isu tinosiya vhidhiyo iine nhau idzo Sworski yaizoshandisa:
Chinhu chekutanga kujekesa ibasa hombe rakaitwa nemushandisi nemamwe mazano ayo, wadii, Apple ingashandisa pane yake system. Simbisa iyo koriori kaunda mune chirongwa chekudya izvo zvinokwana zvakakwana nezvimwe zvakasara zvezviitiko sarudzo izvo iyo system inotipa isu, iyo sarudzo yekuwedzera zvakananga zvipfupi sezvazvinoratidzika kunge zvinogona kuitika mu macOS neshanduro nyowani inoburitswa muna Chikumi kana kunyangwe mabhuku ehurukuro. Ehezve iyo watchface kana imwe yakati nyowani interface inoonekwawo mune ino watchOS 6 pfungwa, asi izvo zvatova zvehukama uye mune izvo zviitiko, chimwe chinhu chakafanana chinogona kuitwa nepikicha sphere yeWatch app.
Unoda here pfungwa iyi? Ungawedzera chero ipi nhau iyo inogona kuoneka?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Isu tinogovana pfungwa nyowani yewatchOS 6 iyo inonakidza
Nakidzwa neTV pane yako Mac neTV Streams